Alhamdulillah, Waxaa Masjidku soo gaba gabaayey munaasabad soconaysay Sabti iyo Axad ( April 2-3, 2016) taas loogu talagalay in ardayda Dugsi lagu hormariyo.
Munaasabadaan oo loogu magac daray (Maalinta Kobcinta Dugsiga) ayaa waxay tahay mid 3dii biloodba mar loo qabto arday Dugsiga BIC. Labadii maalmood ee ay socotay munaasabadaan ayaa waxaa si aad ah looga faa'ideeyey caruurta iyo dhalinta wax-kabarata Dugsiga.
Barnaamijyada laga faa'idaystay waxaa kamid ahaa:- Barashada Alle, Barashada Weesada, Barashada Salaada, Caqiidada iyo Tarbiyada caruurta. dhamaan mawduucyadaas waxay ku baxeen laqadadeena Hooyo iyo Mida English-ka.
Gaba-gabadii Munaasada ayaa waxaa ardayda qaar lasiiyey shahaadooyin ay ku mutaysteen Akhlaada iyo barashada Quranka Kariimka. Intaas kadib, waxaa duco dheer kusoo gaba-gabyeey Imaam Yusuf Abdi Abdulle....
Hoos kadaawo Sawirada Qaar: